बि.सं.२०७४ साल बैशाख २० गते बुधवारको राशिफल
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ बैशाख २० बुधबार |
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३७ । योग सं. ३८ । बैशाख महिनाको २० गते बुधवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ मे महिनाको ०३ तारिख ।
योगः गण्ड योग, २२ः३८ बजेपछि वृद्धि योग ।
तिथीः वसन्त ऋतु बैशाख शुक्लपक्षको अष्टमी तिथी ।
नक्षत्रः तिष्य नक्षत्र, ०९ः४२ बजेपछि अश्लेषा नक्षत्र ।
करणः भद्रा करण १३ः३१ बजेसम्म उपरान्त बव करण ।
चन्द्रमाः कर्कट राशिमा ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०५ः२५ बजे ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १८ः३८ बजे ।
राहुकालः १२ः०१ बजेपछि १३ः४१ बजेसम्म ।
यात्राः १३ः३१ बजेपछि पश्चिम दिशाको लागि उपयुक्त ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन ख्याल पुर्याउनपर्ने खालको छ । ख्यालख्यालमा कसैसँग विवाद हुनपनि सक्नेछ । काममा अबरोध आउनसक्ने र आरोप खेप्नुपर्ने हुनसक्नेछ । पारिवार एवं इष्टमित्रसँग विचारान्तर हु“दैमा हिम्मत नहारेर बुद्धिले कामलिनु बुद्धिमानी हुनेछ । मनमा केही संकोचित विचार बढ्नाले संसर्गीहरुसँग विवाद हुनसक्ने भय देखिएको हुनाले केही सावधानी एवम् संयम गर्नु मनासिव हुनेछ । चोटपटकको पनि भय छ । आँटसाहस र धैर्यता नगुमाई स्वकर्ममा लगनशील रहनाले अप्रत्यासित रुपमा लाभ र सफलता पनि मिल्ने देखिएको छ । आज यहाँको लागि आमाको सेवा सत्कार गरी आर्शिवाद लिनु शुभकर हुनेछ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन हिम्मत, शरीरमा शक्ति तथा स्फुर्ति र जोशजाँगर बढेर आउने एवम् काममा रुचि बढ्ने छ । रोकिएर रहेको महत्त्वपूर्ण काम पूरा गर्न सकिनेछ । मान्छेहरुले प्रशंसा गर्ने छन् । मुख्य कार्य सम्पादन गर्न सहयोग पनि जुट्ने र उत्साह तथा उमङ्ग बढ्नेछ । दाजुभाईबीचको सहकार्यको वातावरण बन्नेछ । व्यवसाय तथा पेशागत क्षेत्रबाट आफ्नो हैसियत अनुसारको आर्थिक लाभ गर्न सकिनेछ । प्रतिस्पर्धामा विजय भइने तथा पुरस्कार आदि आकस्मिक लाभ हातपार्न र सामाजिक प्रख्याति कमाउन सकिनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन ढुकुटीमा लक्ष्मीको र मुखमा सरस्वतीको बास हुने ग्रहयोग परेको हुनाले व्यवसायिक प्रगति भइधनदौल तथा खजाना जम्मा हुनेछ भने वाणीमा ओजस्विता बढ्नेछ । आज कवि तथा कवित्रीको कविता, वक्ताको प्रवचन, कलाकर्मीको गीतसंगीत आदिले राम्रो बजार लिनेछ । त्यस्तै सामान्य जनजीवनका व्यक्तित्त्वहरुको लागि पनि मुख्य कार्य विशेषमा आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । लाभ एवम् सफलताको कारण नयाँ उत्साह र उमङ्ग तथा कुशलता बढ्नेछ । नाताकुटुम्ब बढ्ने तथा पारिवारिक सदस्य थपिने पनि सम्भावना देखिन्छ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन शरीरमा कान्ति र आकर्षण शक्ति बढ्नेछ । सामाकि मानप्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । विशेष मेजमानी तथा मिठो खानेकुरा प्राप्ति हुनसक्ने छ । व्यवसायबाट धनलाभ हुने एवं भौतिक सुख र आफन्तजनबाट प्रशंसा पनि प्राप्ति हुनसक्ने देखिन्छ । अभिष्टकार्यमा सफलता मिल्नसक्ने छ । ईच्छित कार्य पूर्णताको लागि दृढताको साथमा अगाडि बढ्नसकिने छ । कर्मक्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा जिम्मेवारी थपिनसक्ने छ । मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुन पाइने छ । नयाँ लगानीको प्रस्ताव आउनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । आज तपाईको लागि भगवान श्रीहरिको श्रद्धाभक्ति एवं उपाशना विशेष शुभकर हुनेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन प्रतिकूलता बढ्नसक्ने छ । सफलताभन्दा संघर्षलाई प्रसय दिएको गोचरयोग परेकोले कामकार्यमा हतार नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ अन्यथा खर्च बढ्ने सम्भावना रहनेछ । विषय तथा कार्य नबुझि अघि बढ्नाले खतिक्षति र पश्चाताप पर्नसक्ने । केही संघर्ष एवं प्रतिकूलताको बाबजुत सोँच एवं योजनाभन्दा बाहिरबाट आकस्मिक आयआर्जन तथा उपलब्धि भइ आत्मसन्तुष्टि हुने छ । देशविदेशको यात्रा हुनसक्ने छ । दानदातव्य एवं मान्यजनको दर्शनभेट आदिको लागि पनि दिन उपयुक्त रहेको छ । आज यहाँलाई रातो रङ्ग, पाँच अङ्कको उपयोग र भगवान लक्ष्मीनारायणको श्रद्धाभक्ति गर्नु विशेष शुभकर हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजका दिन मिश्रित रहेको छ । अर्थकर उपलब्धि हुन खोज्ने तर अपेक्षा गरेजति हुन नसक्ने छ । आश्वासन मिलेको काम समयमै नभइदिँदा अल्लि दिक्कत लाग्नसक्ने छ । तथापि शरीरमा स्फुर्ति र काममा रुचि बढ्ने, स्वजनबाट मद्दत मिल्ने, समस्याको निकास निस्कने र दैनिकी व्यवसायबाट केही लाभ गर्नसकिने छ । आज ठूलो उपलब्धि खोज्नु भन्दा पनि भौतिक कर्म सम्पादनलाई प्रार्थमिकता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । जसबाट पछि लाभ उठाउन सकिनेछ । आँट साहासपूर्वक कुनै कार्यको लागि पूर्वतयारी पूरा गर्ने जस्ता कार्यमा मन दिनु उचित हुनेछ । दुई अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग र भगवान श्रीगणपतिदेवको सेवा आराधना गर्नु तथा केटाकेटीलाई सख्खर आदि मिष्ठान्न खुवाउनुले ग्रहबाधालाई न्यून गर्न मद्दत हुनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन उच्चस्तरको मानसम्मान प्राप्त हुनसक्ने छ । व्यक्तित्त्वको विकास हुने सुअवसर मिल्ने हुनाले समयको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । व्यापार व्यवसाय, राजनीति एवम् समाजसेवाको क्षेत्रमा ग्रहले राम्रो बल दिएको छ । केही विशिष्ट मान्य व्यक्तित्त्वसँग सम्बन्ध विस्तार हुनसक्ने छ । राज्यतहबाट बनाउनपर्ने कार्य बनाउनको लागि पनि अनुकूल दिन रहेको छ । आज तपाईलाई एक अंक, रातो रङ्ग अनुकूल हुनेछ भने भगवान लक्ष्मीनारायणको श्रद्धाभाव बढाउनु हितकर हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन समयले मोडलिएको छ । उन्नति प्रगति हुनेछ । सहयोगीहरू थपिने छन् । ठूलाबडासँगको भेटघाटले हौंसला बढ्ने तथा महत्त्वकांक्षी भइनेछ । पेशा तथा व्यवसायको विकास हुनगई लाभांश हात पर्नेछ । धर्म–अध्यात्म विषयमा आइरहेको द्वन्दबाट पारपाउन सकिने छ, सत्सङ्गको मनस्थिति बन्नेछ । दाम्पत्यजीवन तथा प्रेमप्रसङ्गमा मधुरता आउनेछ । स्वजनहरुसँग भेटघाट हुनसक्ने छ । जनव्यवहारमा उदारता तथा सहानुभूतिजन्य विचार बढ्ने । आज तपाईलाई नौं अङ्क, पहेंलो रङ्गको प्रयोग र भगवान विष्णुको स्तुति आराधना विशेष शुभकारक हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन त्यति अनुकूल मानिहाल्न हुनेछैन । कर्म क्षेत्रमा बाधा अड्चनको सामना गर्नपर्ने छ । सानोतिनो कार्यमा पनि संघर्षले मात्रै सफलता प्राप्त हुनेछ । विमारी परिनसक्ने सम्भावना रहेकोले आहारविहारमा ख्याल पुर्याउनु होला । शत्रुपक्ष सक्रिय हुनसक्ने र कार्यक्षेत्रमा केही अबरोध आउनसक्ने छ । उपर्युक्त प्रतिकूलताको बाबजुत सकारात्मक सोँचको विकास तथा धैर्य र संयमको अभ्यास थरी स्वकर्ममा लगनशील रहनाले आकस्मिक लाभ तथा उपलब्धि मिल्नसक्ने देखिएको छ । आज तपाईले बाधाबिघ्न निवारणको लागि दीनदुःखी तथा रोगीको सेवा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अल्लि तामसीप्रवृतिको वृतिविलासले प्रसय पाउने हो कि भन्ने देखिएको छ । आमोद–प्रमोद चाहना बढ्ने ग्रहगोचर छ । गलतनियत भएको विपरितलिङ्गीको झमेला पर्नसक्ने खतरा पनि त्यतिकै रहेकोले होस पुर्याउन जरुरी छ । अन्यथा जोशमा होश गुमाउने र फुर्सदमा पछुताउने हुन सक्नेछ । व्यवसाय तर्फ सामान्यतया उन्नति हुनाले आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिनेछ । औपचारिक कार्यक्रम आदिमा पनि सरिक हुनपाइने सम्भावना छ । यात्राको पनि योग देखिएको छ । विवाह प्रस्तावको विषयमा भने विशेष विचार पुर्याउन जरुरी हुनेछ । आज यहाँको लागि सात अङ्क, सेतो रङ्गको प्रयोग र भैरवदेवको स्तुति गर्नु शुभकर हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन व्यवसाय तथा व्यापार आदिबाट लाभ प्राप्त गर्नसकिने छ । अन्य जनव्यवहारका कार्यबाट पनि राम्रो उपलब्धि गर्नसकिने छ । स्वास्थ्यमा आरोग्यता बढ्नेछ भने अनुहारमा कान्ति छाउने छ । मानसिक हिम्मत र शारीरिक क्षमता बढ्ने तथा कामकार्यमा लागिपर्न मन लाग्नेछ । थातिरहेका कामहरु पूरा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । व्यवसायिक कार्य, जागिर तथा उद्यमजन्य पेशाको क्षेत्रबाट आर्थि लाभ र उपलब्धिमूलक सफलता प्राप्त गर्नसकिने छ । विशेष स्थान विशेषको यात्रा योजना बन्नसक्ने कुरालाई पनि ग्रहगोचरले लक्षित गरिरहेको छ । पुरुषार्थ तथा शक्तिसाहस बढाउने गोचरयोग परेको हुनाले खेलाडि तथा अन्य शारीरिक प्रतिस्पर्धीहरुलाई सफलता मिल्ने छ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन ज्ञानविज्ञानको पक्ष बलियो भएर आउने गोचर परेकोछ । विद्याधनको महत्त्वाकांक्षा तथा आत्मप्रशंसाको अभिलाषा पनि बढ्नसक्ने छ । आत्मरतीको आसक्तिलाई संयम गरी भद्रस्वभावको अभ्यास बढाउनसकेमा मानप्रतिष्ठामा विकास गर्न सकिने र विद्वतताको प्रसंशा मिल्ने पनि छ । सामान्यतया व्यवसायिक दिनचर्या अनुकूल नै रहनेछ तथापि बाह्य विषयमा समय दिनाले महत्त्वपूर्ण कार्य थातिरहन पनि सक्नेछ ख्याल पुर्याउनु होला । गृहस्थीहरुको लागि सन्तानपक्षबाट पनि सन्तोष मिल्नेछ । आज यहाँको लागि पाँच अंक, रातो रङ्ग र भगवान नारायण श्रीहरिको दर्शन भक्तिगर्नु लाभप्रद हुनेछ ।
ॐ आयुर्वेद आरोग्यशाला ::
कमलमार्ग घर नं. १७२ केसीटोल कमलपोखरी काठमाडौं ।
फोन ०१–४४३१७४७,मो. ९८४१२२३१२६, ९८०३८७९९७८
ईमेल : aaarogyashala@gmail.com
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २८ गते सोमवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २७ गते आइतवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २६ गते शनिवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २५ गते शुक्रवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २२ गते मङ्गलवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २१ गते सोमवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण २० गते आइतवारको राशिफल
बि.सं.२०७५ साल श्रावण १९ गते शनिवारको राशिफल